1. Yintoni ebalulekileyo ekubhakeni Inika ubukhulu bemibala Kwaye yongeza ubumnandi kwincasa egqibeleleyo Iswekile eninzi Kodwa uyakukholelwa oko Ngubani onokucinga ukuba kulula kakhulu, kwaye ungazithatha ngokulula zonke izixhobo onazo ekhayeni lakho, ekhitshini, zisebenzise ukufafaza iikeyiki zakho kakuhle kwaye uzenze zizingce ngaloo nto. Yinkqubo yokwenyani eyenziwe ekhaya. Ukuba uvavanyo lolonwabo okanye nabani na ofuna ingeniso eyongezelelweyo ngokubhaka. Masenze oko ukunciphisa iindleko ngaxeshanye ngcono.
2. Yintoni iswekile yokuhombisa, iswekile ethe yenziwa ngenkqubo yokugaya. Inkangeleko ngumgubo omhlophe Iqulethe malunga ne-3% ye-cornstarch kwaye isetyenziswa njengesixhobo sokukhupha izinto ezibhakiweyo. I-watermark ilungile ngaphandle kwamatywina ashiyekileyo. Ikwayindibaniselwano yekrimu yokuhombisa ikeyiki, idonati kunye nokwenza oonodoli ukuhombisa iidessert ngokugqibeleleyo. Okubaluleke ngakumbi, kulula ukuyenza ngokwakho, ukunceda ukunciphisa iindleko zokuthenga izinto zokwenza imveliso. Kulula ukuyifumana, kulula ukuyenza ngezi zinto zilandelayo:
3. Kukho izithako ezi-3 kuphela ezinokufumaneka kwindlu nganye ekwenzeni i-icing iswekile: i-150 gram yeswekile.
4. Ngama-11 eegram zesitashi sengqolowa kunye ne-blender
5. Ukuqala kwiswekile. Thela kwi-blender Emva koko ujikeleze kakuhle Ngokusebenzisa ixesha lokujikeleza, kungekudala, malunga nemizuzwana engama-20 ukuya kwengama-30
6. • Emva koko jonga ukuba iswekile edityanisiweyo ilungile okanye hayi. Ukuba kusekho iipilisi, zijikeleze kwakhona. De ibe ilungile, ikhangeleka ngathi ngumgubo omncinci. • Xa iswekile ixutywe kakuhle. Emva koko yongeza ingqolowa kumlinganiselo okhankanywe ngasentla • Emva koko iswekile kunye nombona oxutywe kunye. Hlanganisa zombini izithako ndawonye malunga nemizuzwana engama-10.
7. • Jonga ukuba izithako zidityaniswe kakuhle na nomgubo ocoliweyo wesandla. Kugqityiwe. Emva koko igcinwe kwisitya esitywiniweyo. Ukusetyenziswa ngokulula
8. Yongeza ubumnandi kunye nokufudumala kwi-icing eyenziwe ngokwabo. Ngenxa yokuba ukutya kuchaphazelekayo ekukhetheni izithako ezifanelekileyo Ukuba sinokuvelisa izinto ezingekenziwa Okanye ifakwe kukutya esikwenzileyo ekhaya Ukongeza ekubeni nencasa eyodwa Yazi imvelaphi Kuyanceda ekunciphiseni iindleko kuba yinto enokufumaneka kufutshane nomthendeleko wokubhaka. Masenze iswekile yomkhenkce Hombisa iikeyiki okanye iikeyiki ngokwazo Abantu abadlayo mabazi ubumnandi esibukhathaleleyo ukuba benze oko Ikwafihlwe luthando, inkathalo kunye nobushushu Kuzo zonke iimolekyuli zeelekese ezirhwexwe zihonjiswe kakuhle Okanye ukumema abantwana ukuba benze oonodoli kwaye benze iikeyiki zizinto zonke ezenza iinkumbulo. Kwaye uyancuma nosapho ngokunjalo Ngaphezulu kobumnandi obunencasa